Izimpande ezinamahloni noma izimpande ezimhlophe yigama lesitshalo esifanayo, okuthiwa i-ginger. Umsuka walesi sitshalo ucebile ngezingiberium, amavithamini amaningi eqembu. Sebenzisa impande ekuphekeni kwezizwe ezahlukene ngokupheka izitsha ezihlukahlukene. I-ginger inephunga elimnandi kakhulu futhi elimnandi, kanye nokunambitheka okunembile, okwenza izitsha zibe ezihlwabusayo futhi ziqhakazile. Nge-ginger, kunezinhlobo eziningi ze-amino acid, kodwa kufanele kuqaphele ukuthi kunzima kakhulu ukuba umzimba uzikhiqize ngokuzimela, ngakho-ke ama-amino acids ayengenakulinganiswa emzimbeni wethu. I-ginger isetshenziswe ngendlela ye-powder, ngama-flakes, kodwa futhi asetshenziswa ngendlela yetiyi. Izinzuzo zetiyi ye-ginger zihluke kakhulu. Ukulungiselela kwalo, impande yesitshalo isetshenziswa.
Faka i-ginger nokwenza itiye. Phuza isitshalo sigcwele kakhulu, sinemibala futhi sinempepho. Kukholelwa ukuthi iziphuzo ze-ginger ziyakwazi ukushisa igazi. Lokhu kusho ukuthi iziphuzo ze-ginger zibangela ukusheshiswa okubonakalayo kwe-metabolism emzimbeni, futhi lokhu kuholela ekuthuthukiseni umsebenzi kuwo wonke amasu omzimba, kanye nokususwa kwezinto ezidinga uketshezi kanye ne-toxin. Zonke lezi zinqubo zithonya ngokuphelele ukugcinwa komzimba esimweni esihle, futhi zifaka isandla ekulahlekeni kwesisindo.
Zuza itiye le-ginger.
I-ginger inhle ekuthuthukiseni ukugaya, ukuqinisa imemori, ukwandisa ukondla, ukwandisa ubuciko bezocansi, nokuphatha isibindi. Unomhlaba wokuhlakaza amagesi emathunjini, ukuchitha yonke inhlama eyingozi eyenza ezindongeni zesisu sethu nanoma yiziphi ezinye izitho zokugaya. Uma usebenzisa itiye le-ginger ukuze ulahlekelwe isisindo, ungaqeda izinkinga eziningi ngempilo yakho. Njengoba uyazi, lesi sitshalo sinika zonke izinto eziwusizo kakhulu ezinhlobonhlobo ezihlukahlukene kanye nezitshalo ezihlukahlukene. Yingakho, kusukela itiye le-ginger kunenzuzo enkulu. Kuyinto isiphuzo esilula futhi esithengekayo esinezodwa zonke izimfanelo eziwusizo zalesi sitshalo esimangalisayo.
Izinzuzo zetiye esheshayo. Uma uphuza itiye le-ginger njalo, kuzoholela ekunikezeni igazi elihle nge-oksijini, ebaluleke kakhulu kubantu abahilelekile emsebenzini wengqondo. Kuphawula ukuthi itiye le-ginger lingakwazi ukukhulula ikhanda, kanye nobuhlungu nganoma yikuphi ukulimala, ukwehlisa amanxeba namanxeba. Faka iziphuzo ze-ginger ezifweni ezihlukahlukene, ngoba njalo futhi yonke indawo ibonisa imiphumela emihle kuphela. Uma ulahlekelwa isisindo, ungafinyelela imiphumela emihle kakhulu. Ngenkathi uhlanganisa iziphuzo ezinjalo ezihlukene, ungabonisa ubuningi bokudala, noma kunjalo, inqubo ngokwayo ingaba mnandi kakhulu. Isibonelo, izinkanyezi zaseHollywood ezitokisini ze-ginger zengeza amakhambi ahlukahlukene. Omunye ungezela i-dogrose kuso, futhi othile uthola i-lemon. Lezo zokupheka nemerenoe inani.
Itiyi le-Ginger lingathuthukisa isimo sesikhumba nezinwele, yingakho kungadingeki ukhathazeke ngokuthi ukudla nokudla kweziganga kuzokwenza ubukeka bakho bubi nakakhulu. Kunalokho, itiye le-ginger lizokwenza izinwele zakho zibe shiny, amehlo akho acacile, futhi isikhumba sakho sithande kakhulu futhi sibhebhezele.
Itiye le-Ginger liwusizo kakhulu kubo bonke abantu. Abacwaningi bathanda ukuwaphuza nge-stretch, ama-sips amancane, ngaphambi kokudla nangemva.
Kodwa kuyadingeka ukwazi ukuthi ukuwa itiye kusuka ku-ginger kunezinkampani eziphikisanayo. Ngezifo zesikhumba ezivuthayo, akukhuthazwa ukuwaphuza, ngoba inqubo ingadala nakakhulu. Ukuphuza itiye le-ginger akufanele kube nokushisa okuphezulu kakhulu noma ukucindezela, kungaholela ekusakazweni egazini, lapho umuntu angazizwa ekhudlwana khona.
Indlela yokwenza itiye le-ginger.
Ukuze wenze itiye le-ginger, awudingi isikhathi esiningi. Ukuze ulungiselele, udinga ukuphuza izimpande eziyi-3 cm zemigodi kusukela ekuseni kakhulu ku-thermos 2 amalitha, futhi uphuze kulo lonke usuku, isigamu sesiteshi ngaphambi kokudla nangemva. Ungangezela kule lemon nastoyu, noma yisiphi isiraphu noma uju.
Ukuze wenze iresiphi yesibili, udinga ukusika i-ginger zibe tincetu ezincane uphinde uthele amanzi. Khona-ke konke kufanele kubiliswe ekushiseni okuphansi imizuzu engu-15-20. Lapho itiye likhulile kuya kuma-37 degrees, engeza uju noma ijusi kalamula. Phuza isixazululo njengenjwayelo.
Ukuze unciphise isisindo, ungasebenzisa le recipe, ehlotshaniswa nama-nuances we-flavor. Ukwenza leli teyi, kudingeka sisebenzise i-garlic. I-brew kufanele ibe yelinki eyomile, ngenkathi isebenzisa izithako, ngokusekelwe ku-1 ingxenye i-garlic kanye ne-ginger nezingxenye ezingu-20 zamanzi, okungcono ukubilisa. Beka konke esitokisini esincane, vumela ukuba iphuze imizuzu engama-30, bese ungaphuza isiphuzo ngaphakathi ngokuphepha.
Ungayiphuza kanjani itiye kusuka kumunwe.
Lawo maantombazane asekudla, ungaphuza itiye le-ginger nganoma isiphi isikhathi. Kodwa labo abadla njengenjwayelo, kutuswa ukuba basebentise itiye ngaphambi kokudla. Itiye le-Ginger lizoncishisa ukudla kwakho futhi lisize kakhulu ngokwengeziwe futhi ligcwale kangcono konke okudliwayo, futhi liphazamise ukwakheka kwamaseli amafutha emzimbeni.
Indlela yokubhekana nezinyosi?
Izindlela zomphakathi zokwelapha izinwele
Ukupheka kwabantu ukuthuthukisa inkumbulo
Izifo zezandla ezingcolile
Yeka ukuthi kuyasiza kangakanani ukusikwa uju
I-Euphorbia nezindawo zayo zokwelapha
Izimpawu zezimonyo ezimbi: Sicela uqaphele, lokhu kuyingozi empilweni
Indlela ukupheka amazambane casserole nge inyama enobuthi?
Ukubhoboza Insimbi: Izici Nokunakekelwa
Kusihlwa kusihlwa ekhaya
Indlela yokwenza owesifazane akuthande?
Khetha iphunga lomuntu
Isikhathi sasebusika 2016 emayunivesithi: isimiso, lapho iseshini iqala kwabafundi besikhathi esithile
Ukwandiswa kwezipikili ezisezingeni elihle
I-Gyroscope yezilinganiso zesifazane ngoNovemba 2016
Amacengezi asempumalanga: izitayela ezihamba phambili, Spring 2016, isithombe
Inhlangano yokuzilibazisa kwasebusika